Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » CDC: Afaka mandeha soa aman-tsara izao ny olona vita vaksiny feno
Ny torolàlana fitsangatsanganana vaovao an'ny CDC dia dingana lehibe iray amin'ny làlana tsara izay tohanan'ny siansa
Ny olona vita vaksiny tanteraka dia afaka mandeha soa aman-tsara isaky ny torolàlana vaovao ao amin'ny CDC
Ny olona vita vaksiny feno dia tsy mila fitiliana alohan'ny na aorian'ny dia
Ny olona vita vaksiny tanteraka dia tokony mbola hisaron-tava rehefa mandeha
US Foibe Miady Amin'ny Aretina dia nanambara tamin'ny torolàlana vaovao androany fa afaka mandeha soa aman-tsara izao ny olona vita vaksiny.
Nanampy ny masoivoho fa ny olona vita vaksiny tanteraka dia tsy mila fitiliana mialoha na aorian'izany, raha tsy hoe mila azy ny toerana aleha. Ny olona vita vaksiny tanteraka dia tokony mbola hisaron-tava rehefa mandeha izy ireo, hoy ny masoivoho.
US Travel Association Ny filoha sy ny tale jeneraly Roger Dow dia namoaka ity fanambarana manaraka ity tamin'ny fanambaràn'ny CDC ny zoma teo momba ny fanalana sasatra ny torolàlana momba ny dia ho an'ireo olona nanao vaksiny feno nanoloana ny COVID-19:
“Ny torolàlana momba ny dia vaovao nataon'ny CDC dia dingana lehibe iray mankany amin'ny làlana tsara izay tohanan'ny siansa ary hanaisotra ny freins amin'ny indostria izay voa mafy tamin'ny fianjeran'i COVID hatrizay. Rehefa miverina ny dia dia miverina ny asan'i Etazonia.
“Ny angon-drakitra ao amin'ny CDC dia manondro fa ny olona vita vaksiny dia tsy mamindra ny coronavirus, izay manokatra varavarana malalaka kokoa hanohizany ny dia indray, na eo aza ny fanarahana akaiky ny fomba fanao tsara indrindra momba ny fahasalamana. Manaiky fa ny vaksininy dia manafoana ny filàna fitsapana sy ny quarantine dia manala sakana lehibe amin'ny dia an-trano. Ny fanajana ny tolo-kevitry ny mpitsidika iraisam-pirenena dia tsy maintsy Karokantine koa dia dingana lehibe iray mitohy.
“Ny fijanonana nandritra ny herintaona dia nanimba ny asan'i Etazonia, miaraka amin'ireo asa tohanan'ny dia mitentina 65% ny asa amerikana very rehetra tamin'ny taon-dasa, ary ity dia fotoana iray hanombohana hitaky be ny very. Ny mantra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany mandritra ny areti-mandringana dia tokony hotarihin'ny siansa, izay mampiseho mazava tsara fa izao no fotoana mety amin'ity hetsika ity.
“Mandritra izany fotoana izany dia zava-dehibe hatrany ny hanaovana vaksiny vantany vao azon'ireo amerikana mendrika raha vantany vao afaka mamerina haingana ny fahafahan'ny rehetra mandeha malalaka.”